Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara - Madagascar-Tribune.com
Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara
Manoloana ny didim-pitondrana navoakan’ny Ministeran’ny Paositra, ny Fifandraisan-davitra ary ny Fifandrasisana, manakatona ny Televisiona VIVA, ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia manao izao fanambarana izao :
• 1- Ny fahamaroan’ny orin’asa mpampahampalala vavao dia fepetra iray takian’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety mba hahafahan’ny olom-pirenena tsy an-kanavaka manana loharanom-baovao feno mamela azy hanana safidy malalaka. Noho izany, ny Holafitry ny mpanao gazety dia tohina mandrakariva manoloana fanakatonana foibe fampalalam-baovao sy haino aman-jery. Noho izany ny Holafitra dia mitaky ny hamelana hiasa ireo fitaovam-pifandraisana sy haino aman-jery niharan’ny fanakatonana.
• 2- Ny Holafitry ny mpanao Gazety eto Madagasikara dia miantso mpa,ao gazety tsy an- kanavaka hamantatra sy handalina ny lalàna mifehy ny fifandraisana sy ny fanaovan- gazety manan- kery eto amin’ny Firenena amin’izao fotoana izao ary hanaja izany ao anatin’ny fenitra sy ny fitsipi-pitondratena (déontologie et éthique) mifehy ny asa fanaovan- gazety.
• 3- Ny Holafitry ny Mpanao gazety eto Madagasikara dia miantso ny mpitondra mahefa isan’ambaratongany mba handinika sy hamoaka haingana ny lalàna vaovao mifehy ny fifandraisana eto Madagasikara, mifandraika amin’ny zava-misy eran-tany sy eto Madagasikara amin’izao vanin’andro misy antsika izao.
Antananarivo faha 15 desambra 2008